Orinasa fantsom-bozaka vita amin'ny rano vita amin'ny indostria, mpamatsy - Mpanamboatra fantsom-bozaka vita amin'ny rano any Shina
Hose simika misy vidiny tsara Tube fantsona: fotsy, malefaka avo lenta mololozatra polyethylene (UHMWPE), fanamafisana EPDM: Tady lamba mihamitombo avo misy tariby vy helix Cover rubber: EPDM mahatohitra ny simika, ny toetr'andro ary ny ozon, manga, maitso mifono na mitafo. Ny mari-pana miasa mety: —40 ℃ ~ 120 ℃ (-72 ℉ ka hatramin'ny 248 ℉). Antoka fiarovana: 3: 1. Fampiharana hosoka simika UHMWPE malefaka dia be mpampiasa amin'ny fitrohana sy famoahana asidra mahery sy alkaly ary karazan-tsiranoka isan-karazany. Ny ma ...
Fantson-tsiranoka vita amin'ny sakafo miaraka amin'ny Tube Fanamboarana fanamarinana an'ny FDA: Fotsy, malama, NR, NBR na EPDM fanamafisana ny kalitaon'ny sakafo: Mampitombo ny lamba sentetika avo lenta sy ny tariby helix Cover: malama (fonosana vita), fingotra vita amin'ny sentetika, fotsy, manga, maitso nofonosina . Temperature: -32 ℃ hatramin'ny 80 ℃ (-90 ℉ hatramin'ny + 176 ℉) Fampiharana fantsom-pisakafoanana misy fantsom-pisakafoanana betsaka no ampiasaina amin'ny fitrohana sy ranom-boankazo, divay, fametahana sakafo ary menaka azo hanina sns .. Toetra mampiavaka azy: malefaka kokoa ny toetran'ny mailaka -resi ...
Teknôlôjia misy herinaratra nohamafisina miaraka amin'ny tsindry avo lenta tsirairay notsapaina tamin'ny 1.5 heny noho ny tsindry miasa, ny atiny avo vita amin'ny fingotra tsy nisy fingotra voaverina. Tube Tube: fingotra sentetika NR & SBR, loko mainty. Fanamafisana: kofehy lamba na kofehy kofehy avo. Sarony: Volo vita amin'ny sentetika NR & SBR, faritra malama na fonosina, mainty, mavo, mena azo. Fampiharana Ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampitana ny rivotra, gazy tsy mitongilana ary rano amin'ny fitrandrahana, fananganana, injeniera, fanamboarana sambo, vy vita amin'ny vy ...
Sitroka amin'ny rano sy fantsom-panafody Tube fantsona: Black, malama, NR, fambolena fingotra SBR. Fanamafisana: Tady lamba am-pahefana avo misy tariby vy. Sarony: Mainty, malama, fahatsapana lamba na mitafo fanitso, vovon-kibo SBR. Fampiharana Ity karazana fantsona ity dia natao ho an'ny fitrohana rano sy famoahana rano, ary ranoka tsy manimba izay ampiasaina amin'ny toerana fanamboarana sy ny fampiharana indostrialy adidy maivana. Ny fantson-drano avo lenta avo lenta ho an'ny fepetra miasa mafy sy mafy ...
Fantsom-pifandraisana fitrandrahana solika tanky Tube Tube: Mainty, malama, NBR. Fanamafisana: Tady lamba am-pahefana avo misy tariby vy. Sarony: Mainty / mena / maintso, fonosana misarona na mivonto, toetrandro sy ozon. mahazaka, fingotra sentetika. Antoka fiarovana: 3: 1. Temperature: -30 ℃ (-22 ℉) hatramin'ny + 80 ℃ (+ 176 ℉) Fangatahana ho an'ny fitrohana sy famoahana ireo vokatra miorina amin'ny solika, solika, lasantsy, solika, solika. Izy io dia mahazaka ny banga, ny herinaratra manohitra ny static, miaraka amin'ny tariby varahina.
Tavoahangin'ny solika hydraulic
Fantsom-pitrandrahana solika Hydraulika Tube: mainty, malefaka NBR + Fanamafisana SBR: Tady lamba am-pahefana avo misy tariby vy helix. Sarony: Mainty / mena / maintso, fonosana misarona na mivonto, toetrandro sy ozon. mahazaka, fingotra sentetika. Antoka fiarovana: 3: 1. Temperature: -20 ℃ (-4 ℉) hatramin'ny + 80 ℃ (+ 176 ℉) Fampiharana ampiasaina betsaka amin'ny rafitra mekanika hydraulic rafitra, fantsona miverina, fiara injeniera, sns, ny atin'ny hidrokarôma manitra dia tsy mihoatra ny 20%. Toetra mampiavaka ny toetr'andro sy ny rakotra mahatohitra abrasion. Samy sm ...
Fantsom-pitrandrahana sandblast mahatohitra Super abrasion Tube: mainty, malefaka, fingotra sentetika NR fanamafisana: lamba miharo tanjaka avo lenta Fonony: Mainty, malama (fonosina), fantsom-panafody NR mahazaka abrasion Fampihosena hosoka mahatohitra rindrina malefaka natao ho an'ny fandefasana tifitra vy, fasika , fampiharana fanapoahana vakana: Suhu: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Toetra mampiavaka azy: ny fantsakantsika Sandblast dia ho an'ny fampiharana sandblast amin'ny ankapobeny. Natao ho an'ny famindrana haingana ny fasika, vy voatifitra, ...
Tube fikirakirana fitaovana
Tube fantsom-pitaovana mahatohitra mitafy ambony: Tube fingotra mainty, malama, NR + BR. Fanamafisana: kofehy lamba amam-bika avo na tadin'ny lamba mihosotra avo misy tariby vy. Sarony: fingotra sentetika mainty, malama (fonosina) na mitafo volo. Temperature: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Fampiharana fantsona mahatohitra abrasion sy fonony vita amin'ny fitaovana avo lenta. Ampiasaina amin'ny famindrana ireo fitaovana maina & slurry ary mety amin'ny simenitra maina, sokay vatokely ary ireo hafa manimba ahy ...
Tube fantsona simenitra maina maharitra matevina azo ampiasaina: Tube vita amin'ny synthetic, mahazaka fanoherana ary misy fiantraikany maharitra (NR + BR). Fanamafisana fanamafisana: lamba firakotra avo vita amin'ny lamba fonosana fonosana: NR + SBR Antoka fiarovana: 3: 1 mari-pana miasa: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Fampiharana: fantsona mahatohitra abrasion ary fonony vita amin'ny fitaovana avo lenta. Ampiasaina amin'ny famindrana ireo fitaovana maina & slurry ary mety amin'ny simenitra maina, sokay vatokely ary media hafa manimba. Toetra mampiavaka ny fingotra anatiny vita amin'ny avo ...
Tube Tube: fingotra sentetika NR & SBR, loko mainty. Fanamafisana: kofehy lamba mihamitombo. Sarony: Volo vita amin'ny sentetika NR & SBR, faritra malama na fonosina, mainty, mavo, mena azo. Miasa mari-pana: -20 ° C — 80 ° C Tombony 1. Fanoherana ny abrasion, harafesina, hafanana ary fahanterana Maizina, henjana, maharitra ary maharitra ny fiainana. 2.Roll up flat dia mora mihetsika, retrieval ary tantanana. 3. Fiainana maivana, henjana, maharitra ary maharitra. 4.Mora manitatra amin'ny halavany lava kokoa miaraka amina fantsona ...
Ranon-drivotra sy rano mafana
Tube fantsom-pamokarana etona sy rano mafana: Tube mainty, malama, fanoherana ny setroka avo setroka hafanana EPDM. Fanamafisana fanamafisam-peo: kofehy lamba mitafy haingotraingotra fiarovana: 4: 1 Fonony: Mainty / fotsy / manga / maitso, malama (fonosana vita) vitaosy vita amin'ny epDM. Ny hafanana avo, ny toetr'andro ary ny fanoherana ny ozon. Ny mari-pana miasa: -40 ℃ (-40 ℉) hatramin'ny + 150 ℃ (+ 302 ℉) Fampiharana: fantson-drano etona sy rano mafana mety ho an'ny rindranasa maro amin'ny indostrian'ny fiara, ny fitaovana fanadiovana, ny rafitra mangatsiaka, Coolin ...